ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးပိုင်ဆိုင်ရတော့မယ့် Rain နဲ့ Kim Tae Hee တို့ဇနီးမောင်နှံ – Trend.com.mm
Posted on February 26, 2019 February 26, 2019 by Noel
နာမည်ကျော်တောင်ကိုရီးယားအနုပညာရှင် မင်းသမီး Kim Tae Hee နဲ့ Rain တို့ဇနီးမောင်နှံကို အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် သူတို့ရဲ့ 
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ရက်နေ့က မင်းသမီးချော Kim Tae Hee ရဲ့ အေဂျင်စီ BS Company က “Kim Tae Hee ဟာ အခုဆိုရင် ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးကို
လွယ်ထားရပါပြီ။ရင်သွေးလေးကို ဒီစက်တင်ဘာမှာမွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သူမက အခု ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်လာပါပြီ”လို့ အတည်ပြု
သတင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။BS Company ကပဲ ထပ်ပြီး “သူမရဲ့ သမီးဦးလေးကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလက မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု Kim Tae Hee ဟာ သူမရဲ့ဒုတိယရင်သွေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဝမ်းသာနေပြီး ရင်သွေးလေး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက်သာ အာရုံစိုက်နေပါတယ်။သူမရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကလည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။Kim Tae Hee ကိုအမြဲချစ်ပေး အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့ ကောင်းချီးပေးမှုတွေ၊ဂုဏ်ပြုပေးမှုတွေအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်”လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းကောင်းလေး !
မင်းသား Rain ဟာ အခုလတ်တလောမှာတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားသစ်”Uhm Bok Dong” အတွက် အင်တာဗျူးတွေ
နာမညျကြျောတောငျကိုရီးယားအနုပညာရှငျ မငျးသမီး Kim Tae Hee နဲ့ Rain တို့ဇနီးမောငျနှံကို အားပေးခဈြခငျကွတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ သူတို့ရဲ့
ဖဖေျောဝါရီ ၂၆ရကျနကေ့ မငျးသမီးခြော Kim Tae Hee ရဲ့အဂေငျြစီ BS Company က “Kim Tae Hee ဟာ အခုဆိုရငျ ဒုတိယမွောကျရငျသှေးလေးကို
လှယျထားရပါပွီ။ရငျသှေးလေးကို ဒီစကျတငျဘာမှာမှေးမယျလို့မြှျောလငျ့ရပါတယျ။သူမက အခု ကလေးနှဈယောကျမိခငျဖွဈလာပါပွီ”လို့ အတညျပွု
သတငျးကွညောခဲ့ပါတယျ။BS Company ကပဲ ထပျပွီး “သူမရဲ့သမီးဦးလေးကို ၂၀၁၇ အောကျတိုဘာလက မှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အခု Kim Tae Hee ဟာ သူမရဲ့ဒုတိယရငျသှေးလေးနဲ့ပတျသကျပွီး စိတျလှုပျရှားဝမျးသာနပွေီး ရငျသှေးလေး ကောငျးကောငျးမှနျမှနျမှေးဖှားနိုငျဖို့အတှကျသာ အာရုံစိုကျနပေါတယျ။သူမရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနေကေလညျး ကောငျးမှနျပါတယျ။Kim Tae Hee ကိုအမွဲခဈြပေး အားပေးကွတဲ့ပရိသတျတှကေိုလညျးကြှနျတျောတို့ တကယျကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ။ပရိသတျတှရေဲ့ကောငျးခြီးပေးမှုတှေ၊ဂုဏျပွုပေးမှုတှအေတှကျလညျး ကြှနျတျောတို့ဝမျးသာကနြေပျမိပါတယျ”လို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ကွညျနူးစရာကောငျးလိုကျတဲ့သတငျးကောငျးလေး !
မငျးသား Rain ဟာ အခုလတျတလောမှာတော့ ဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးကိုရိုကျကူးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ဇာတျကားသဈ”Uhm Bok Dong” အတှကျ အငျတာဗြူးတှေ
အချိန်နီးမှ ကတိုက်ကရိုက်ထလုပ်တဲ့ အကျင့်စွဲနေပြီလား